ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဒညင်းသီးနှင့် ပဲကြီးလှော် စားသူများ မဖတ်ရ
ဒညင်းသီးနှင့် ပဲကြီးလှော် စားသူများ မဖတ်ရ
ညချစ်သူ | 1:08 AM | ဟာသ
ညချစ်သူ | 1:08 AM |
ဒီနေ့ ကျွန်တော့မွေးနေ့ ... မနက်အစောကြီး ချစ်သူနဲ့ ဘုရားသွားခဲ့ပြီ ... ညရောက်ရင် ကျွန်တော့အိမ်မှာ အံ့သြဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်သွားစေရမယ်လို့ ချစ်သူကပြောတယ်... လုံးဝ suprise ဖြစ်စေရမယ့်တဲ့... ဒီသတင်းထူးလေးကို ရင်မှာပိုက်ပြီး... ကျွန်တော်ရဲ့အထည်ဆိုင်လေးကို ရောက်ခဲ့တယ်... ချစ်သူလည်း သူ့အလုပ် ကို သွားပြီ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ အလုပ်လုပ်ရတာ တအားပျော်နေတယ်... ဖောက်သည်တွေနဲ့ စကားဖွဲ့နေလိုက်တာ ... ထမင်းစားချိန်တောင်ကျော်သွားခဲ့တယ်..ထမင်းဆိုင်ကိုရောက်တော့ ညနေ၃နာရီရှိပြီ ဟင်းက ဘာမှ သိပ်မကျန်တော့ဘူး ... ပဲကြီးလှော်သုပ်နဲ့ ဒညင်းသီးချက်... ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟင်း၂ခွက် ... ပြီးတော့ ကျွန်တော် မစားရဲဆုံး ဟင်း၂ခွက် မတတ်နိုင်တော့ပြီ ... ဒါမှ မစားရင် စားစရာမရှိ ခဏနေ ဆိုင်မှာ ပစ္စည်းရောက်လို့ အလုပ်ကလုပ်ရအုံးမယ်.. အားမရှိလို့မဖြစ်... ထမင်း၂ပန်းကန် ကုန်တော့ ကျွန်တော် ဆိုင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်...
ဆိုင်သိမ်းချိန်က ညနေ ၆နာရီခွဲ .. ဆိုင်သိမ်းဖို့ တံခါးပိတ်နေတုန်းမှာ ဗိုက်ထဲက စစ်ဖြစ်လာပြီ ... အထက်ပိုင်းနယ်မြေက အောက်ဘက်ကို ဖိတိုက်နေတယ်... ညနေပိုင်းနေအေးချိန်မို့လား ဆိုင်ရှေ့လမ်းမှာ လူအနည်းငယ် ရှိနေတယ်... တခါးကိုအသံထွက်အောင် ဆောင့်ပိတ်လိုက်တယ်... ဒိန်း ..( ဘူ ....) .. တပြိုင်းတည်းဖြစ်အောင် စည်းချက်ညီညီပဲ ဘယ်သူမှမသိအောင် အီးပေါက်လိုက်တယ်... ပိုင်သကွာ... ဒါပေမယ့် ... နေ့လည်စာ ပဲကြီးလှော်နဲ့ဒညင်းသီးက ပညာပြပြီးရင်းပြပဲ ... အနံ့သက်က လမ်းသွားလမ်းလာ တွေ နှာခေါင်းရှုံ့သွားကြစေတယ်... ဗိုက်ထဲမှာ နောက်တစ်ကြိမ်လေစုနေပြန်ပြီ အပြင်ထွက်ဖို့အားခဲနေတယ်.. လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို အားနာလို့ အားခဲပြီးအောင့်ထားလိုက်တယ်.. မျက်နှာကြီးကို နီလို့ ... ကားရပ်နားတဲ့နေရာကို ခြေထောက်လေးစုပြီး လမ်းလျှောက်လာလိုက်တာ... အခြောက်လို့ အထင်ခံရပြီး အစခံလိုက်ရသေး ... ကားတံခါး သော့ကို remove နဲ့နှိပ်လိုက်တယ် "တီ .. တီ .."
တံခါးဖွင့်ပြီး ကားထဲအမြန်ဝင်လိုက်တယ်... " ဘူ ... ." ဟား ... နံစော်နေလိုက်တာ... စက်နိုးပြီး ကားပြတင်း မှန် ချ မယ် အလုပ်မှာ ကားသော့က သော့ပေါက်ထဲ မထည့်ရသေးဘူး ဖုန်းကမြည်လာတယ်... ringtone ကို နားထောင်တာနဲ့သိတယ်.. ချစ်သူစီက ဖုန်း ...
၂ခါမြည်လို့မှ မကိုင်ရင် စိတ်ကောက်နေကြချစ်သူ ကြောင့် ဖုန်းအရင်ကိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်...
သော့ကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ ဖုန်းကို အိပ်ထောင်ထဲကနေ လှမ်းအယူမှာ သော့က ထိုင်ခုံအောက်ကိုပြုတ်ကျတယ်... အားပါးပါး သေပြီ ... " ဟဲလို .. အော့ .."
" ဘာ အော့ လည်း ကိုကိုနော်... မွေးနေ့ပွဲ ပျက်ချင်တာလား ..."
"မဟုတ်ပါဘူး အော့ရယ်.. အာ .. မှားပြန်ပြီ ..." လက်တစ်ဖက်နဲ့ နှာခေါင်းကို ပိတ်ထားလိုက်တယ်... " ဂျစ်ရေး ပြော .."
" ကိုကို စကားကောင်းပြောမလို့ ... မပြောချင်လည်း ချပြီ ... တီတီ တီ ..."
" ဟာ .. ချစ်လေး ချစ်လေး ... " ကားထဲမှာ က အီးစော် နံထောင်းနေပြီ ... တံခါး ပြန်ဖွင့်ပြီ အသက်ရှူရတယ်...
အပြင်ရောက်တော့ ဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်တယ်.. " ချစ်လေး sorry နော် .. ခုန ကိုကို မပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ... ကိုကို .................. " ဖုန်းသာ ပြန်ဆက်လိုက်တယ်... ခုနကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကို ဘယ်လို ဆင်ခြေပေးမလည်း စဉ်းစားဖို့မေ့နေတယ်...
"ထားလိုက်တော့ .. ကိုကို ချစ်လေးပြောမယ်... ကိုကို အခုပြန်လာနေပြီလား ..."
" အင်း .. ပြန်လာနေပြီ .. "
" ကိုကို ချစ်လေးကို ဝင်မကြိုနဲ့တော့ .. ကိုကို့ အိမ်ကို ချစ်လေး သွားနှင့်လိုက်မယ်... ပြင်စရာ ရှိတာ ပြင်ထားမလို့ ... ကိုကို အိမ်ရောက်ရင် ချစ်လေးစီ ဖုန်းဆက် ... ချစ်လေး ထွက်လာခဲ့မယ်.. အိမ်ထဲ မောင်းမဝင်ခဲ့ရဘူးနော်..."
"ဟုတ်ပါပြီဗျာ ဟုတ်ပါပြီ ..."
" အဲဒါဆို ဒါပဲ ... ရင်တွေခုန်မနေနဲ့နော် ... ထူးခြားတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ဖို့ ချစ်လေးတာဝန်ထား ... ဂရုစိုက်မောင်း... တာ့တာ ... "
ကျွန်တော် ဖုန်းချပြီး ကားတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ အနံသက်က မကင်းသေးဘူး ... ထိုင်ခုံအောက် က သော့ကို ယူပြီး ကားစက်နိုး ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ပြီးမှ ကားပေါ်တက်နိုင်တော့တယ်...
အိမ်ပြန်တဲ့ တစ်လမ်းလုံးလည်း ... ကားထဲမှာ တဘူဘူ နဲ့ ... ဗိုက်ထဲက တကယ်ကို နေမကောင်းနေတာ ... အားရပါးရ ပေါက်ထားမှ... အိမ်ရောက်လို့ birthday သီးချင်းဆိုနေတုန်း တဘူဘူ ဖြစ်နေရင် ရှက်စရာကြီး ....
ကျွန်တော် ကားကို အရှိန်တင်လိုက်တယ်... ပြီးတော့ အီးကို တဘွတ်ဘွတ် ပေါက်တော့တယ်.. ကားအရှိန်တင်လိုက်တော့ လေတိုးတဲ့အရှိန်ကြောင့် ကျွန်တော် အီးနံ့မရှူမိတော့မှာပါ ...
ကျွန်တော် ကားအရှိန် တင်လိုက်ချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ကပ်ကျော်မိတယ်... အဲဒါကို ကိုယ့်လူက မကျေနပ်ဘူးထင်တယ်.. တတီတီ နဲ့ ဟွန်းတီးပြီး ဆဲဆိုကျော်တတ်တယ်... သူကလည်း မကျေနပ်ချက်နဲ့ ကပ်ကျော်တယ်ဗျာ ... ကားဘေးနားရောက်တော့ ... ထက်လိုက်မလာတော့ဘူး .. နောက်ကြည့်မှန်ကနေ ကြည့်လိုက်တော့ .. ကိုယ့်လူ တအော့အော့ အန်နေတာတွေ့တယ်.. ဟိုက်ရှားပါ ... ကျွန်တော့အီး အဲဒီလောက်တောင် နံသလား ....
ရပ်ကွက် လမ်းထဲ ချိုးဝင်လိုက်တော့ ဗိုက်က နည်းနည်းသက်သာလာပြီ ... အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ချစ်သူစီ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်... ချစ်သူက အိမ်ရှေ့ထွက်လာပြီး လာကြိုတယ်...
"အဲ .. ကိုကို ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ ကား အဲကွန်မဖွင့်တာလည်း ... ကားမှန်တွေကလည်း လေးခုလုံး တောင် ချထားတယ်..."
" အင်း ဟုတ်တယ်... နေ့တိုင်းအဲကွန်းနဲ့ စီးနေတော့ ကားလေတိုးတဲ့အရသာ မတွေ့ရတာကြာလို့ ဒီနေ့ဖွင့်လာတာ ... ကိုကို ရင်တွေ ပူနေတယ်လေ ... ချစ်လေးရဲ့ suprise ကိုသိချင်နေတာ .. ကားအဲကွန်းလောက်နဲ့ မအေးနိုင်တော့လို့ သဘာဝ လေကို ရှူလာတာ " ... ' သဘာမဝတဲ့ လေတော့ ကားအရှိန်နဲ့ ကျန်ခဲ့ပြီ ..ဟိဟိ ..'
" ကိုကို လာ ဒီအဝတ်နဲ့ မျက်စိ စီးထား ... အိမ်ထဲသွားမယ်..." ထူးထူးဆန်းဆန်းလေး ဖြစ်စေချင်လို့ပါ လို့ ချစ်သူကပြောတယ်...ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ဘာမှ မမြင်ဘဲ ချစ်သူလက်လေး တွဲပြီး အိမ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်... တံခါဖွင့်ဘုကိုလှည့်တယ်... အိမ်ထဲမှာ ဘာအသံမှ မကြားဘူး .. ရင်ထဲအိကနဲ ဖြစ်သွားတယ်... ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာငယ်လေးပေါ့ ဒီညတော့ ပျော်စရာကြီးပဲနေမှာ... အိမ်ထဲလည်း ဝင်လိုက်ရော ... ဗိုက်ကတစ်စခန်းထလာပြန်ပြီ ... ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ မအောင့်နိုင်တော့ဘူး .. " တီ တီ ဖုန်းလာနေတယ်... တီတီ ဖုန်းလာနေတယ်.. " ကယ်တော်မူမယ့် ဖုန်းပါလား .. ချစ်သူဖုန်းရဲ့ ringtone ကိုကြားလိုက်တော့ ...ကျွန်တော် ပျော်သွားတယ် ...
" ချစ်လေး ကိုယ်ခဏ ဧည့်ခန်းထဲနားအုံးမယ်လေ .. ဖုန်းပြောပြီးရင်ခေါ်နော်.."
" အင်း ဟုတ်ပြီလေ .. အလုပ်ရှင် က ခေါ်တာဆိုတော့ အလုပ်အကြောင်းမေးမလို့နဲ့တူတယ်.. ခဏပြောပြီးရင် ချစ်လေး ပြန်ဝင်လာခဲ့မယ်..မျက်လုံးစီးထားတာ လုံးဝ မဖြုတ်ရဘူးနော်.. ဖြုတ်ရင် သေခန်းပြတ်ပဲ ..." ဧည့်ခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး ချစ်သူထွက်သွားတယ်... တံခါး ဂျက်ကို ကမန်းကတန်း ချပြီး ......................... " ဘူ ........" ဟိုက်ရှားပါး ... ပေါ့သွားတာပဲ ... .. ဟင် .. နံလိုက်တာ .. အနံ့ကလည်း ခုထိ မပျောက်သေးပါလား .. ဒညင်းသီးပုပ်နံ့လိုလိုပဲ ... ဘယ်လိုလုပ်မလဲ .. စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ လိုက်စမ်းတယ်... ဂျာနယ်လား သတင်းစာလားမသိ စမ်းမိတယ်.. အားရပါးရ ယပ်ခပ်တော့တယ် ... ချစ်သူဖုန်းပြောနေတဲ့အသံကိုလည်း ဂရုစိုက်လိုက်သေးတယ်.. ပြောလို့မပြီးသေး .. အနံ့ကတော့ သက်သာသွားပြီ...
ဟား.. .. လာပြန်ပြီး ... ဗိုက်ထဲကနေ တလိတ်လိတ်နဲ့ တက်လာလိုက်တာ... မဟုတ်ဘူးမှားသွားတယ်.. ဆင်းသွားလိုက်တာပြောရမှာ တက်လာလိုက်တာဆိုရင်.. ပါးစပ်ကနေပဲ အီးပေါက်ရမလိုဖြစ်နေပြီ ... အေး .. တလိတ်လိတ်နဲ့ ဆင်းသွားလိုက်တာ.... ဖင်နားလေးလည်းရောက်တော့ ... " ဘွတ် .. " ... အားလားလား ... နေရလည်းခက် နံကလည်းနံ ... မထူးပါဘူးကွာ.. .. ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ စတိုင်လ် ပန် ဘောင်းဘီ ရှည် ကြီးကို လုံးဝ ချွတ်လိုက်ပြီး... အီးပေါက် ပါတော့တယ်.. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါက်နေရတော့ ဖင်နေလို့ကောင်းပေမယ့် နှာခေါင်းက နေလို့မကောင်းဘူးဗျ ... အဲဒါနဲ့ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေရဘူး ... ယပ်ခပ်လိုက် ပေါက်လိုက်နဲ့ ...လက်ညောင်းလာတော့ ကျွန်တော် စမ်းတန်းစမ်းတန်း နဲ့ သွားလိုက်တာ ... ဝရံတာ တံခါးနား ရောက်လာတယ်... ဟဲဟဲ .. ည ၇ နာရီလောက်ဆို ဘယ်သူမှ မမြင်လောက်ပါဘူး လေ ... တံခါးကို ဖွင့် ဖင်ကို ပင့်လို့ သဘာဝလေတိုက်တဲ့ အပြင်ဘက်ကို ဖင်ထုတ် အီးပေါက် ပါတော့တယ်... လေးငါး ဆယ် ချက်လောက် ပေါက်ပြီးတော့ ဗိုက်ထဲတော်တော်လေးကို သက်သာသွားပြီ ... တံခါးကိုပိတ် ပြီး ... ဧည့်ခန်းတံခါးနားကို ပြန်လာခဲ့တယ်... ဂျက်ချထားတာ ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်တယ် ... အပြင်မှာဖုန်းပြောနေတဲ့ ချစ်သူ " ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ကောင်းသောညချမ်းပါ " ပြောနေတာ ကြားနေရပြီ .. ဖုန်းပြောလို့ ပြီးတော့မယ်.. အသက် ကို တစ်ချက် ရှိုက်ရှူ ကြည့်တယ်.. အနံ့ပျောက်သွားပြီ ..ဘောင်းဘီ သေသေသပ်သပ်ပြင်ဝတ်လိုက်တယ် ဟဲဟဲ. . တော်ပါသေးရဲ့ ... ချစ်သူရှေ့ မွေးနေ့မှာ အရှက်ကွဲတော့မလို့ ....
တံခါးဖွင့်သံကြားရတယ်.. ချစ်သူဝင်လာပြီထင်တယ်.. "ကိုကို ... ခိုးကြည့်သေးလား ... "
"မကြည့်ပါဘူးချစ်လေးရယ်... " အားရဝမ်းသာတဲ့အပြုံးနဲ့ ချစ်သူကို ကြိုနေတယ်.. ပြုံးနိုင်ပြီပေါ့လေ... ဗိုက်က လုံးဝ သက်သာသွားပြီပဲ... ချစ်သူက သူဒီလောက်ဖုန်းအကြာကြီးပြောလိုက်လို့ တောင်းပန်တယ်... တကယ် ခိုးမကြည့်ဘူးနော်လို့ ထပ်ခါထပ်ခါ မေးပြန်တယ်.... ပြီးတော့ ကျွန်တော့ မျက်စိ စီးထားတဲ့ အဝတ်ကို ဖြေးဖြေးလေး ဖြုတ်ပေးတယ်... " အံသြသွားစေရမယ် အနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်.... "
ကျွန်တော် လှည့်အကြည့်မှာ ....................................
" အံ့သြသွားပြီလား ... ကိုကို မိတ်ဆက်ပေးထားလို့ပြောတဲ့ ချစ်လေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေလေ... သူတို့ကလည်း ကို့ကို့ကို တွေ့ချင်နေတာ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အရမ်းချော အရမ်းကျက်သားရေ ရှိတယ်တဲ့ အဲဒါနဲ့ ကိုကို နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မွေးနေ့ပွဲမှာ ခေါ်လာခဲ့တာ ... ဟိုမှာ စားပွဲရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ ၃ ယောက်က ချစ်လေးနဲ့ ဌာနတစ်ခုထဲက ဟိုဘက် ဆိုဖာခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ၂ယောက်က ချစ်လေး အချစ်ဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်း၂ ယောက်လေ ..."
ဘယ်ထွက်ပြေးလို့ ထွက်ပြေးရမှန်းမသိ ဘယ်ပုန်းလို့ ပုန်းရမှန်းမသိ ဝရံတာကနေပဲ ခုန်းချရမလား ဝရံတာကို လှမ်းအကြည့် ... ချစ်လေးက ဝရံတာ တံခါး ဖွင့်တာတွေ့လိုက်တယ် ... " ဒီမှာ ကိုကို ပိုပြီး အံ့သြသွားအောင် ချစ်လေးရဲ့မေမေ ဖေဖေ နဲ့ ကိုကြီးရယ် ညီမလေး ရယ် ... "
ငယ်ထိပ် တည့်တည့် မိုးကြိုးပစ်တာက ပိုနေလို့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်.. . ကျွန်တော့ ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပူထူနေတာပဲ ... ဧည့်ခန်းထဲက မိန်းကလေး ၅ယောက် ချစ်လေးရဲ့ မိသားစု ၄ ယောက် သူတို့ တွေ ကျွန်တော့ ရဲ့ suprise ဖြစ်စရာ ထူးထူးခြားခြား မွေးနေ့ပွဲလေးကို ... လူတိုင်းရဲ့ မျက်နှာမှာ ထူထူခြားခြား အပြုံးနုနုလေးတွေနဲ့ ... အဘယ်သို့သော ဘာသာစကားနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ရမည် မသိသော အကြည့်တွေနဲ့ ... ကျွန်တော့ကိုကြည့်နေကြတယ်... စကြာဝဠာ မှာ မပါတဲ့ ဂြိုလ်ကြီး တစ်ခုက လာတဲ့ ဂြိုလ်သား ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ ပေါ့ ... . .. .. ...
ကျွန်တော် အဲဒီနေ့က စပြီး ... ဒညင်းသီးမစားတော့ပါ ... ပဲကြီးလှော် မဝါးတော့ပါ ... ချစ်သူကတော့ မိဘသဘောမတူလို့ဆိုပြီး .. .. ဝမ်းမနည်းပဲ(ကျွန်တော့အဲဒီနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကိုသိသွားလို့နေမယ်) နောက်တစ်ယောက်နဲ့ စေ့စပ်သွားပါတယ် ###### ဘူ @@@@@ ဘွတ် %%%%% ဘူ
မပြီးသေးပါဘူး ... စာရေးဆရာ အင်တာဗျူးချင်တဲ့သူလေးတွေကို အင်တာဗျူးအုံးမလိုပါ ...
စားပွဲရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ အမတို့က သူ အီးပေါက်တုန်း လန့်မသွားဘူးလား ...
" အီးပေါက်တုန်းက မလန့်ပါဘူး ဘောင်းဘီချွတ်မှ လန့်သွားတာ ... "
" အီးစပေါက်တုန်းက နံလိုက်တာ ... ရေမွေးဖျန်းထားတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါ မပါရင် ကျွန်မ အန်မိမှာ အမှန်ပဲ ..."
"အီးပေါက်ကလည်း ကြမ်းလိုက်တာ အီးကလည်းနံ ... သူယပ်ခပ်ဖို့ လိုက်ရှာနေတာတွေ့လို့ ဂျာနယ်ကို လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်... ယပ်ခပ်လို့ ပြီးတော့ ရပ်မယ်မှတ်နေတာ ဘောင်းဘီတောင်ချွတ်ပြီးပေါက်လိုက်သေးတယ် .. အော့ .. တွေးရင်းနဲ့တောင် အန်ချင်လာပြီ"
ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အမ ၂ ယောက် ကော လန့်မသွားဘူးလား .. ဘောင်ဘီ ချွတ်တုန်းက အမတို့ ဘက် လှည့်ချွတ်တာလေ ...
" အမလေး .. မပြောချင်တော့ပါဘူး .. ရှက်လိုက်တာ... အီးပေါက်ကတည်းက သူ့ရုပ်ကို မကြည့်ချင်တော့တာ .. သူက ဘောင်ဘီ များတောင် ချွတ်ပြလိုက်သေး ... "
" ဟုတ်တယ် ကျွန်မ လည်း ရှက်လိုက်တာ သူ ခါးပတ် ဖြုတ်ကတည်းက ဘာလုပ်တော့မယ် သိလို့ မျက်စိ မှိတ်ထားလိုက်ပြီ .. ဘေးမှာ ထိုင်တဲ့ သူ့ကိုတောင် လက်နဲ့ မျက်စိ လိုက်အုပ်ပေးသေးတယ်... သူက ဆွဲဆွဲချနေလို့ မအုပ်တော့ပဲ ကြည့်ခိုင်းထားလိုက်တော့တယ်... တကယ်လည်း ချွတ်တော့ .. သူ့ကို ပါးစပ် အုပ်ထားလိုက်တော့တယ်..." (မျက်စိက သူ့ဟာသူ့ မှိတ်ပါ့မလား O(∩_∩)O~ )
ဝရံတာက ဦးဦးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ် တို့ ဝရံတာတံခါးဖွင့်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်း
" အေးကွာ ဦးကတော့ ပြောင်ပြောင် ပြောင်ပြောင် နဲ့ ဘာကြီး ထွက်လာလည်းပေါ့ ပြီးတော့ ၂ခုတောင်၊ ဘာကြီးမှန်းလည်းသိရော ပြောင်ပြောင် ၂ခု ကြားကနေ 'ဘူ' ကနဲ အသံ ထွက်လာတာပဲ "
" ယောက်ျားကလည်း ဘူ မဟုတ်ပါဘူး .. ဘွတ် လို့ ထွက်တာပါ .. မိန်းမ သေသေချာချာ ကြည့်လို့ သိလိုက်တယ်.."
" နင်က မျက်မှန်မေ့ခဲ့လို့ အဝေးမှ မမြင်တာ ဘယ်လို သေချာကြည့်လဲ ပြီးတော့ သေချာကြည့်တာနဲ့ အသံကြားတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ"
" ယောက်ျားကလည်း အဝေးမမြင်ရလို့ ဖြူဖြူကြီးထွက်လာတော့ ဘာကြီးလည်း ဆိုတာ အနီးကပ် သွားကြည့်လိုက်တာလေ .. နှာခေါင်း က ဖြူဖြူ ၂ ခု ကြား နား ရောက်တော့ ဘွတ် ဆို ပြီး အသံ ထွက်လာတာ ... "
အဲဗျာ .. ဒေါ်ဒေါ် အဲလိုကြီး ရှူမိတာ မနံဘူးလား ...
" အဲဒီနေ့က အအေးမိပြီ နှာခေါင်းပိတ်နေတယ်လေ .. ဘွတ်လို့ကြားမှ ယောက်ျားက နောက်ကလှန်းဆွဲပြီး တိုးတိုးပြောလို့ သိရတာ .. အဲဒါ ဖင်ကြီး အီးပေါက်နေတယ်လို့ .... "
ဒီက ညီလေးနဲ့ ညီမလေး ရော် ဘာတွေ ပြောအုံးမလည်း
" သမီးက သောက်မြင်ကပ်လို့ သားရေကွင်းနဲ့ ပစ်မလို့ ... ကိုကို ကြီး ဆွဲထားလို့ ... မဟုတ်ရင်လား .. ဟင်း ... ."
ဒီမှာပဲ ပြီးတော့ပါမယ်... ဒါနဲ့ ခဏနော် တစ်ယောက် ဗျူးဖို့ ကျန်နေသေးတယ်.. ခုန လမ်းမ ပေါ် ထွက်ရှာတာလည်း မတွေ့မိဘူး .... ဆိုင်ကယ်သမားကိုပြောတာ ... ဆေးရုံရောက်နေတယ် သတင်းရလို့ ဆေးရုံကို ပဲ ဖုန်းဆက် ပြီး ဗျူးလိုက်ပါတယ်..
" ကျွန်တော် ဗျာ ... ကံဆိုးပါတယ်... ထွက်ခါ စ အီးကို မှ သွားရှူမိတာကိုးဗျ ... ... နံလိုက်တာ အန်လိုက်တာ ... ရှော့ခ် ဝင်သွားတဲ့အထိပါပဲ ... ကျွန်တော် အခု ပုလင်း ချိတ်နေရတယ်... အားမရှိဘူး စကားမပြောနိုင်တော့လို့ ဒါပဲဗျာ .. တူ . တူ . တူ .. "
အီးမင်းသားကိုရော ဗျူးကြအုံးမလား ...
" လား မဗျူး နဲ့ .. သွား .... "
"ဒီတစ်သက် ဒညင်းသီးလည်း မစားတော့ဘူး ... ပဲကြီးလှော် လဲ မဝါးတော့ဘူး..."
Posted by ညချစ်သူ at 1:08 AM